IIMPENDULO | I-Ningbo Horizon Magnetic Technologies Co, Ltd.
Ngaba uyayamkela imveliso yesiko?
Ewe. Sizama ukubonelela kunye nokuphuhlisa izisombululo ezenziwe ngokwesiko kwimiceli mngeni yemihla ngemihla kwimagnethi ezinqabileyo zomhlaba kunye neenkqubo zeemagneti zeNeodymium. Ukuveliswa kwesiko kubonisa ngaphezulu kweepesenti ezingama-70 zentengiso yethu.
Hayi, nabuphi na ubungakanani bamkelekile, kodwa ixabiso lifuna uhlengahlengiso kubungakanani beodolo yakho, kuba iindleko zemveliso ziyahluka kubungakanani. Kucetyiswa ubungakanani obukhulu ukwenzela ukunciphisa iindleko zakho kunye nexabiso.
Yeyiphi imiqathango yentlawulo oyamkelayo?
Singayamkela intlawulo nge-T / T, L / C, nge-Western Union, njl.njl. Imigaqo yokuhlawula inokwahluka kubathengi abohlukeneyo. Abathengi abatsha, ngesiqhelo samkela i-30% yedipozithi kwangaphambili kunye nokulingana ngaphambi kokuthunyelwa. Kubathengi bexesha elide, sivumela amagama angcono, njenge-30% yedipozithi kwangaphambili kunye nokulingana ngokuchasene nekopi ye-B / L, idipozithi engama-30% kwangaphambili kunye nokulinganisela emva kokufumana iimagnethi, i-100% yentlawulo emva kokuthunyelwa, okanye kwiintsuku ezingama-30 emva kokufumana iimagnethi.
Ixesha lokukhokela lingahluka kwiimagnethi nakwiinkqubo zemagnethi. Ixesha elikhokelayo ziintsuku ezingama-7-10 zeesampulu zemagneti zeNeodymium kunye neentsuku ezili-15 ukuya kwezi-20 kulungiselelwa isampulu yenkqubo yomazibuthe. Kuba imveliso mass, ixesha phambili iintsuku ezingama-20-30 iimagnethi zomhlaba ezinqabileyo, kunye neentsuku 25-35 ukuba iindibano ezinqabileyo umazibuthe komhlaba. Imeko inokutshintsha, ke sicebisa ukuba ujonge nathi ngaphambi kokufaka iodolo, kuba ngamanye amaxesha ezinye iindibano zemigangatho yeNeodymium ezinokubakho zinokufumaneka ngexesha elifanelekileyo.
Ngaba ungathumela iimagnethi okanye iimveliso zemagnethi ngomoya?
Ewe. Kwinqwelomoya, zininzi iintlobo zeekhompyuter ezibalulekileyo zezixhobo ezibuthathaka kumandla ombane. Sisebenzisa iipakethe zethu ezikhethekileyo ukukhusela amandla ombane ukuze iimagnethi zihanjiswe ngomoya ngokukhuselekileyo.
Iwaranti yethu yezixhobo kunye nomsebenzi. Ukuzinikela kwethu kukoneliseka kwiimveliso zethu. Nokuba yeyiphi na iwaranti okanye akunjalo, yinkcubeko yenkampani yethu ukujongana nokusombulula yonke imiba yabathengi ukoneliseka ngumntu wonke.
Njani malunga nentlawulo yokuthumela?
Iindleko zokuhambisa zixhomekeke kwindlela okhetha ukufumana ngayo iimpahla. Ukucacisa kwindlu ngendlu kuhlala yeyona ndlela ikhawulezayo kodwa ebiza kakhulu. Ulwandle lwaselwandle sesona sisombululo sisiso sokuthunyelwa ngenqanawa okunzima. Sinokucaphula ngokuthe ngqo amaxabiso ezithuthi ukuba ucebisa ngeenkcukacha zobungakanani beodolo, indawo ekuyiwa kuyo kunye nendlela yokuhambisa.
Ewe sinokubonelela ngamaxwebhu amaninzi kubandakanya imigaqo yemveliso, ingxelo yokuhlola, iRoHS, REACH, kunye namanye amaxwebhu okuhambisa apho kufuneka khona.